မတရားရုံးချုပ်က အန်အယ်ဒီပါတီ ရပ်တည်ခွင့်အယူခံကို ပယ်ချ NLD Appeal | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aung San/Aung San Suu Kyi » မတရားရုံးချုပ်က အန်အယ်ဒီပါတီ ရပ်တည်ခွင့်အယူခံကို ပယ်ချ NLD Appeal
မတရားရုံးချုပ်က အန်အယ်ဒီပါတီ ရပ်တည်ခွင့်အယူခံကို ပယ်ချ NLD Appeal
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Jan 28, 2011 in Aung San/Aung San Suu Kyi, Legal Information/Visa, Myanma News |5comments
ကျပ်ပြေးမြို့တော်ရှိ မတရားရုံးချုပ်ကနေ အန်အယ်ဒီပါတီ ဆက်လက်ရပ်တည်ခွင့် အယူခံကို ပယ်ချလိုက်သည်။ ဒီလိုပယ်ချဖို့ကို မတရားရုံးချုပ်က မိနစ်အနည်းငယ်လောက်ပဲ အချိန်ယူကြားနာ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ ရှေ့နေဦးကျော်ဟိုးမှပြောသည်။ ဒေါ်စုအဖို့ ပါတီဆက်လက်ရပ်တည်ခွင့်အတွက် ဥပဒေဆိုင်ရာ ရွေးချယ်စရာလမ်း ကုန်သွားပြီ။ ရှေ့နေကတော့ ဥပဒေကြောင်းအရ ဆက်တိုက်ပွဲဝင်မည်၊ ပါတီအနေနဲ့ မတရားသူကြီးချုပ်ထံ တိုက်ရိုက်အယူခံတင်နိုင်ဖို့အတွက် ပါတီလူကြီးများနဲ့ တိုင်ပင်မည်ဟုပြောသည်။
Myanmar court rejects Suu Kyi party appeal
YANGON (AFP) – Myanmar democracy icon Aung San Suu Kyi’s party saw its hopes forapolitical future dashed again on Friday as the country’s Supreme Court brushed aside its latest appeal against dissolution.
The court in the capital Naypyidaw took onlyafew minutes to reject the National League for Democracy’s (NLD) legal bid, according to Kyaw Hoe,alawyer for the party.
Suu Kyi has all but exhausted her options in the courts to reinstate the party asapolitical entity after it was dissolved by Mynamar’s ruling junta last year ahead of controversial elections. But Kyaw Hoe said they could keep fighting.
“We have to decide whether we will continue the legal process… We can apply directly to the Chief Justice again according to the law. But we have to discuss with NLD senior members,” he said.
Court verdicts in the military-ruled country rarely favour opposition activists andaseries of appeals by Suu Kyi against her house arrest — before it expired in November — were rejected.
Shortly after Suu Kyi’s release, the Supreme Court refused to hear her lawsuit against the junta for dissolving the NLD. She had unsuccessfully filed an earlier suit with the same court aimed at preventing its abolition.
The Nobel Peace Prize winner was freed from more than seven years in detention on November 13, days afterapoll in which the main junta-backed party claimed overwhelming victory, amid opposition claims of intimidation and fraud.
The party was disbanded last year for choosing to boycott the country’s first election in 20 years in response to rules that seemed designed to bar Suu Kyi from taking part.
အဲဒီလိုပါတီကြီးတွေတောင် ..အမတ်တွေက .. ဟိုဖက်ဒီဖက် ..ရွေ့ ကြတာပဲ..။
တရားရေးက ခွင့်မပေးတော့ရင်… အဲဒီအကုန်ရွေ့ လိုက်ကြပေါ့..။
ကေသရာဇာခြင်္သေ့မှန်ရင် မြက်မစားဘူးဗျ။ ဒေါ်စုက အဲသည်လောက်ပျော့နေမှဖြင့် ၁၉၉၃ညီးလာခံထဲကထွက်ပါ့မလား။ အဖွဲ့ဝင်ပေါင်းများစွာ၊ နှစ်ပေါင်းများစွာစတေးပြီး ချီတက်လာခဲ့တာကို အခုမှအဆန်းလုပ်ပြီး ဂငယ်ကွေ့ မကွေ့ဘူး။ အတိုက်အခံအမတ်ဆိုသူတွေသာ ပါလီမန်ထဲ ဘယ်လိုစခန်းသွားမလဲ ကြည့်အုံးပေါ့။ အပြင်ကျတော့လည်း လူလိုသူလို အဖက်လုပ်ခံရပါ့မလား။ ဒုရဲအုပ်အဆင့်လောက်နယ်ထိန်းက ခေါ်ဟောက်လိုက်။ မအဖစာရေးကခေါ်မေးလိုက်၊ ကားရထားထိုင်ခုံလက်မှတ်မရလို့ ခုံမဲ့စီးလိုက်ရတဲ့ အမတ်မင်းသတင်းများ မကြားပါရစေနဲ့။
ဒါပါပဲ…ပါတီရှိမှ နိုင်ငံရေးလုပ်လို့ ရတာမဟုတ်း။ပါတီမရှိလည်း နိုင်ငံရေးဆိုတာရှိနေမှာပါပဲ။သူတို့ကလည်း သူတို့လုပ်စရာရှိတာလုပ်မှာပဲ။ကိုယ့်ဘက်ကလည်း ကိုယ်လုပ်နိုင်တာတွေဆက်လုပ်ကြရမှာပဲ။မြန်မာပြည်၏နိုင်ငံရေးသည်နိုင်ငံသားတိုင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည်။မြန်မာပြည်ကြီးတည်ရှိနေသရွေ့၊မြန်မာပြည်၏အရေးသည် နိုင်ငံသားတိုင်း၏အရေးဖြစ်သည်။
ဤနေရာမှာ မိမိတစ်မိသားစုထဲ အတွက်လုပ်ဆောင်နေသူများမပါ။မိမိအမျိုးကိုသာချစ်သူများမပါ။
လူများစုလက်ခံတယ် ၊ လက်မခံဘူး ဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့် အမှန်တရားဟာပြောင်းလဲမသွားနိုင်ဘူး။
[အီတလျံတွေးခေါ်ရှင် Giordano Bruno (1548-1600)]